अनलाइन « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
आजदेखि अनलाइनबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई आजदेखि अनलाइनबाट पुन श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था लागु गरिएको छ । अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति दिन सकिने गरी सफ्टवेयरको विकास गरिसकेकाले आजदेखि जुनसुकै देशबाट सहज
काठमाडौं, मंसिर २० । काठमाडौं महानगरपालिकाले अनलाइन प्रणालीमार्फत रु. ४३ करोड २६ लाख ५५ हजार ५७२ राजस्व असुल गरेको छ । गत असोज १ गतेदेखि अनलाइनमार्फत राजस्व सङ्कलन कार्य शुरु
मुक्तिनाथ विकास बैंकको अनलाइन कर्जा सेवा सुरु
काठमाडौं, मंसिर ११ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले कोरोना महामारीको विषम परिस्थितीमा डिजिटल प्रणालीको प्रोत्साहन गर्ने गरी अनलाइन कर्जा आवेदन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने क्रममा बैंकले
कक्षा १२ को परीक्षा अनलाइन माध्यमबाट नहुने
काठमाडौं, कात्तिक २४ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा अनलाइन माध्यमबाट गर्न नसकिने जनाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अनलाइनबाट परीक्षा गराउन निर्देशन दिएको समाचार
काठमाडौं, कात्तिक १९ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोरोना जोखिमको विषम स्थितिमा कक्षा १२ को परीक्षा विद्यार्थी जहाँ छन्, त्यहीँबाट पनि दिन सकिने गरी तयारी गर्न राष्ट्रिय परीक्षा
पहिलोपल्ट भर्चुअल माध्यमबाट कार्यक्रम गरि प्रदान गरियो यस वर्षको मदन पुरस्कार र जगदम्बाश्री सम्मान
काठमाडौं, कात्तिक २ । कोरोना भाइरसको संन्त्रासका कारण पहिलो पटक मदन पुरस्कार भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न गरिएको छ । मदन पुरस्कार गुठीले आयोजना गरेको मदन पुरस्कार तथा जगदम्बाश्री सम्मान अर्पण समारोह
अनलाइन प्रणालीमार्फत महानगरपालिकाले असुल्यो रु पाँच करोड ५० लाख राजश्व
काठमाडौं । अनलाइन प्रणालीबाट राजश्व निर्धारण तथा सङ्कलन कार्य शुरु गरेको एक महिना बित्न नपाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु पाँच करोड ५० लाख असुल गरेको छ । कामपाले यस प्रणालीको शुरुआत
ट्राफिक सम्बन्धी काम अब अनलाइनबाटै: मोबाइल वा कम्यूटरबाट एक क्लिकमा सबै काम
अनलाइन कारोबारलाई व्यवस्थीत गर्ने कहिले ?
काठमाडौं, असोज १४ । कोरोनाका कारण नेपालमा अनलाइन कारोवार प्रति ग्राहकको संख्यामा बृद्धि हुन थालेपछि अनलाइन व्यवसाय गर्ने कम्पनीको संख्या पनि बढेका छन् । तर ती कम्पनीको बैधानिकताका साथै तीनले
काठमाडौं, असोज ११ । काठमाडौं महानगर पालिकाले ३२ वटै वडाको राजस्व प्रणाली अनलाइनमार्फत सेवा सुरु भएको ११ दिनमै ८ सय ५० करदातामार्फत १ करोड ६० लाख राजश्व असुली गरेको छ